အစားကောင်းကြိုက်သူများခုနှစ်တွင်ဥရောပများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများဘယ်မှာ Are | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အစားကောင်းကြိုက်သူများခုနှစ်တွင်ဥရောပများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများဘယ်မှာ Are
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 23/10/2020)
အစားအစာကဒါပဲ ဘုန်းကြီးသော, အထူးသဖြင့်အရသာအစားအစာ. ဥရောပတှငျနထေိုငျသငျသညျကဤမျှလောက်အကြောင်းပြချက်ပေးသည်တဲ့အခါမှာဒါဟာနှင့်အတူစွဲလမ်းခံရဖို့ဒါလွယ်ကူပါတယ်! အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများဥရောပ၌ရှိကြ၏, ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာအစားကောင်းကြိုက်သူများများမှာကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ, သင်ဤဘလော့ဂ်နှင့်အတူမှတဆင့်အနေဖြင့်အခါဒါကြောင့်သင်လိမ့်မည်! ရုံ, ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ.
လူတိုင်းယခုကသိတယ် - သငျမေတ္တာ၌လဲဥရောပသွားလျှင်, သငျသညျများမှာ ပြင်သစ်ကိုသွား. Little ကသင်က၎င်း၏ကစားသောက်ဆိုင်တွေမှာနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲပြင်သစ်သွားကြသည်သော်လည်းသိကျွမ်းခဲ့ဘူး, အဖြစ်ကောင်းစွာ! အစားအစာက၎င်း၏မတ်ေတာအတှကျကျော်ကြားနေတဲ့တိုင်းပြည်အတွင်းကပြင်ဆင်နေ, စားသောက်ရန်အကြိုက်ဆုံးနေရာအရပ်ကောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ရဲ့. အဘယ်သူမျှမအမှား Make, သော်လည်း – လိုင်ယွန်စူးစမ်းဖို့ပြင်သစ်ထိပ်တန်းအစားကောင်းကြိုက်သူများသောနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်! ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်: လတ်ဆတ်တဲ့အစိမ်းရောင် cornichon Pickled နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်လိုက်သည်ကိုဆလာမီ rosettes နှင့် အာလူးချောင်းကြော်. လိုင်ယွန်နှင့်အတူချိတ်ဆက် ရထားလမ်းအားဖြင့်ဆွစ်ဇာလန် ဒါကြောင့်သင်အမြဲ "ဒီကူး pop နိုင်ပါတယ်ချောကလက်တိုင်းပြည်"မွှေးမုန့်ညက် finish ကိုများအတွက်.
Lyon Highspeed ရထားသို့ဘရပ်ဆဲလ်
သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးချောကလက်အဘို့အသွားကြသည်ရှိရာဗီယင်နာ၏ Buzz မြို့ဖြစ်၏ ဥရောပ၌ကိတ်မုန့် - Sachertorte. အရသာကြွယ်ဝ, မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသော, ဒီအတွက်ကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိတ်မုန့်ကျွမ်းကျင်သူသြစတြီးယားဥရောပမှာအစားကောင်းကြိုက်သူများများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများတဦးဖြစ်ချီးမြှင့်. ဒါကြောင့်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးကိုရှာဖွေ? ဗီယင်နာရဲ့ကော်ဖီအိမ်များမဆိုအတွက်! ဒါဟာနိုင်ငံရဲ့လက်မှတ်ကိတ်မုန့်ဖြစ်ပါသည်, နှင့် ဒေသခံတွေ သင်ကဒါမယ့်ငါသိ၏သေချာအောင်.
မှတ်စု: အနည်းငယ်သောမြို့သူမြို့သားဓါတ်ပုံများနှင့်၎င်းတို့၏အစားအစာ SNAP စဉ်ရှိ – သင်လုပ်ချင်တယ် သင့်ရဲ့ Instagram ကိုထွန်းလင်းစေ, ya မ?
စန်း Sebastian, စပိန်
သငျသညျမြို့အပေါင်းတို့၌အကောင်းဆုံးပါတီများနှိပ်နဲ့တူခံစားမိလိုက်တဲ့အခါ, ရုံစန်း Sebastian ထွက်စားသောက်! ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်, သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုစပိန် Tapas စားနိုင်, သင်ကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်. ဒါပေမဲ့, THE အကောင်းဆုံးရရန်, ဒီပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့၌ကြိုးစားကြ. အဘယ်အရာကိုဤအရပျဒီတော့အထူးစေသည်အဓိကအားသည်သင်တို့ထံကရှေးခယျြနိုငျအရသာနှင့် artistry ၏အကွာအဝေးဖြစ်ပါသည်. စပ်ချဉ်, ပူပြင်းခြင်းနှင့်အအေး, တောနှင့်ခေတ်မီဆန်းပြား, တစ်ခုတည်းဘားမှာတွေ့ရှိခံရဖို့အားလုံးများမှာ. သငျသညျတှေ့ရတစ်ဦးချင်းစီအရပျ၌အနည်းငယ်အပိုင်းပိုင်းကြိုးစားပါ. သငျသညျအပြည့်အဝဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိဖြစ်လိမ့်မယ်.
ဟုတ်ကဲ့, ရထားအစားအစာအံ့မခန်းပေမယ့်ပင်ကိုမဖွစျနိုငျ အကောင်းဆုံးကိုရထားအစားအစာ ကိုပင်ဟေဂင်ရဲ့ Noma မှနှိုင်းယှဉ်! နော်ဒစ်အစားအစာ၏အချက်ပြမီးသဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, သင်ထုတ်စစ်ဆေးသွားပါရန်သင့်ပါဝါအတွက်အရာအားလုံးလုပျသငျ့တယျ. မသာဒီတစ်ခုဥရောပမှာအစားကောင်းကြိုက်သူများများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများတစ်ခုဖြစ်သည်ပါဘူး, စားသောက်ဆိုင်တွေမှာအဆိုပါအဘယ်သူမျှမခဲ့. 1 နှစ်ပေါင်းများအတွက်စန်း Pellegrino စာရင်းတွင်အစက်အပြောက်! ဟုတ်ကဲ့, စျေးနှုန်းမြင့်မား, သို့သော်သင်ရတဲ့နေအရသာကရကျိုးနပ်သည်. သငျသညျရထားယမ်ကူး pop လိုပါက, ကိုပင်ဟေဂင့်လုပ်နေတာအဘို့ကြီးစွာသောတံခါးပေါက်မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါသည်.
ကျွန်တော်တို့ တံဆိပ် Trieste နှင့်အတူအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်း, အီတလီ
ကျနော်တို့အပေါငျးတို့သ Delicious ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲဥရောပမှာအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများအကြောင်းရေးသားလို့မရပါဘူး အီတလီ. ကောင်းပြီ ... အားလုံးမဟုတ်ပေမယ့်အနည်းဆုံးအားအချို့.
Trieste ပထမကမ္ဘာစစ်အထိ Austro-ဟနျဂရေီအင်ပါယာပိုင်. ဒီမှာဤအချက်ကို Trieste ရဲ့အရသာဟင်းလျာများ၏အရေးပါမှုကိုမှဖြည့်စွက်. အဘယ်ကြောင့်? Trieste ရဲ့သမိုင်းက၎င်း၏အစားအစာအပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှု left သောကြောင့်. ၏ Atypical ပုံမှန်အီတလီဟင်းလျာများ, Trieste ခေါက်ဆွဲ၏ထိုကဲ့သို့သောလိုက်တယ် combo အပေါ် prides နှင့် ပီဇာ sauerkraut နှင့်လိုက်သည်ကိုဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ, နှင့်အလားတူ. အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာခံစားကြည့်ပါ, creamy ချောကလက်, ဂျိမ်း Joyce Ulysses ရေးသားခြင်းစတင်ရှိရာမြို့နှင့်အလွကော်ဖီ. အဆိုပါ Adriatic ဖြတ်ပြီးတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မြင်ကွင်းကိုသင့်ရဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်, ဖြစ်စေ. အီတလီနှင့်ဆလိုဗေးနီးအကြားဆက်သွယ်မှုကိုရထားလမ်းအားဖြင့်စုံလင်သည်, အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းရှိနေစဉ်ဒါကြောင့်သင်လိုဗေးနီးနေတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုပေးနိုင်ပါသည်.
ရထား Trieste မှဂျီနိုအာ
သမိုင်း, အစာ, နှင့်ဥရောပအမြဲလက်၌လက်ကိုသွား, နှင့်ယခုသင်အလွန်လွယ်ကူစွာကအားလုံးကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းများ. ဝင်ရောက် တစ်ဦးရထား Save ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရထားလမ်းလက်မှတ်ဝယ်ယနေ့သင့်ရဲ့အစားကောင်းကြိုက်သူများစွန့်စားမှုစတင်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-foodies-europe%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml သင် / fr မှ / က de သို့မဟုတ် / es နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#traveleurope အစာ အစားသောင်းကြမ်းသူ အစားကောင်းကြိုက်သူများ ရထားခရီးသွား